ကင်းဘရစ်ရဲ့အကြီးအဆုံးပါမောက္ခ - ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
လေဆာညွှန်ပြမည့်အစားငှက်ပျောကိုအသုံးပြုလိုသောကထိကတစ် ဦး သို့မဟုတ်အတွင်းကြီးကြပ်မှူးအတွင်းကျပန်းအဝတ်အစားမဝတ်ရဟုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူသည်သင့်အားရရှိပြီးသည်နှင့်သင့်အား Proust နှင့်အလွယ်တကူဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်မျှော်လင့်သည်။ သို့သော်ကင်းဘရစ်၌အရှိဆုံး batshit စားပြီး dons ဘယ်သူတွေလဲ ဒီမှာငါတို့စိတ်ကူးငါးခုပါပဲ
အသုံးချသင်္ချာနှင့်သီအိုရီရူပဗေဒဌာန - Dr. Stephen Cowley
Stephen Cowley ကသူ၏ဌာနဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာကသင့်အားပြောပြမည့်အတိုင်း We We Clone the Spy ၏ပုံကြမ်းဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသည့်ကထိကဖြစ်ပြီးသူသည် Wheee ကဲ့သို့သောအရာများကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်။ နှင့် Whoosh! တစ် ဦး ပုံပေါ်လိုင်းများဆွဲတဲ့အခါ။ သူ့မှာကိုယ်ပိုင်တောင်ရှိတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အုပ်စု Facebook ပေါ်မှာ 'S.J. ကိုခေါ် Cowley Appreciation Society 'သည်ဝမ်းနည်းစရာမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ မှစတင်၍ ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုအသစ်မရရှိသေးသော်လည်းသူသည် ၁၉၈၁ နှင့် ၁၉၉၀ မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်များတွင် Selwyn ကောလိပ်တွင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက် Selwyn ရှိသစ်သားဇွန်းများ၏သမိုင်းနှင့်မလွဲမရှောင်သာဖတ်ရသောသင်္ချာ tripos နှင့်သူတို့၏ချိတ်ဆက်မှုအကြောင်း။
အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းလေ့လာရေးဌာန - ဒေါက်တာဂျိုးဇက် McDermott
Joe McDermott သည်မကြာသေးမီကအာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းလေ့လာရေးဌာနမှအငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီးနောက်သူသည်ဝမ်းနည်းပူဆွေး။ ဗလာကင်းမဲ့နေခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏ဟောပြောချက်စာတမ်းတွင်လိင်ဆိုင်ရာရည်ညွှန်းမှုများကိုလုပ်ကိုင်ရန်အစားထိုးမရသောစွမ်းရည်ရှိခဲ့သည် - အရှေ့အာရှသမိုင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုတွင်သူနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် qi Viagra အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲများကိုငယ်ရွယ်သောလူငယ်များလိုက်စားခဲ့သောစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ သူ၏ဂန္ထဝင်တရုတ်စာသင်ခန်းများတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ မည်သည့်ဒေသသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သနည်း၊ တစ်ချိန်ကသူသည် erotica နှင့်လုံးဝလုံးဝမသက်ဆိုင်သောဂန္ထဝင်ဝတ္ထုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင်တရုတ်ရှေးဟောင်းပန်းချီကားများစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလှည့်ပတ်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏တရုတ်ပညာရေးကို The Other Place တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ပြောခဲ့သည် -
သူ၏ရုံးခန်းသည်အလွန်ကြာမြင့်စွာကြီးထွားခဲ့သောကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနေရာဖြစ်သောဆရာ ၀ န်ကိုပိတ်ပြီးသော့ခတ်ပြီးသည်အထိတခါတရံသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်။ စာရွက်နှင့်တရုတ်စာအုပ်ဟောင်းများပြိုလဲသွားပုံရသည်။
အလယ်ခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်ဘာသာစကားများဌာန - ဒေါက်တာ Andrew Martin
ဒီတော့ suave ။ ထိုကဲ့သို့သောအရိပ်။
သင်ကအန်ဒီမာတင်ရဲ့ပို့ချချက်တွေကိုတက်ရောက်တဲ့ပြင်သစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆိုရင် Samuel Beckett ဟာကျောက်ပုစွန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ချဉ်းကပ်တာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ Madame Bovary အဓိကအားဖြင့်လိင်နှင့်စျေးဝယ်ဝတ္ထုဖြစ်ပြီး, မွန်တီကွန်းရဲ့ ပါရှန်းစာများ ရုံမြေအောက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီးအကောင်းဆုံးစာအုပ်၏အဆုံးနှင့်အတူစတင်ဖတ်ပါ။ Becksistentialism: ဤစာပေဗဟုသုတအားလုံးသည်ဒေါက်တာမာတင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်အတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်အတူဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့စစ်မှုထမ်းတစ်လျှောက်လုံးဒေါက်တာမာတင်တစ် ဦး ထားရှိမည် ရေတံခွန် သူကပါရီပညာတတ်ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်တိုက်မိသောအခါဘက်ခမ်း၏အတွင်းပိုင်း monologue ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည် - ဖြစ်တည်မှုဝါဒကပွင့်လင်းနေသောဘောလုံးအိုင်ကွန်၏တောက်ပသောမျက်နှာပြင်။ သူသည် Becksistentialism အကြောင်းဆွေးနွေးမှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သူသည်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်လည်းပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကင်းဘရစ်ဘာသာစကားကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်လက်တွေ့မကျသောလက်တွေ့ကျသောဘဝကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် MML ။
အင်္ဂလိပ်ဌာန ဒေါက်တာအင်ဒရူး Zurcher
အင်ဒရူး Zurcher သည် Renaissance စာပေတွင်သင်ကြားမည်ဖြစ်သော်လည်းသူ၏စစ်မှန်သောခေါ်ဆိုမှုသည်စာမျက်နှာ၏အခြားတစ်ဖက်၌ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာ ဦး Edmund Spencer ၏ကျော်ကြားသောမပြည့်စုံသောမော်ကွန်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်သည် Faerie Queene , ညဥ့်အခါသူသည်ဤအလုပ်ကိုအချိန်ပြည့် ၀ တ်စုံတွင်ဖယောင်းတိုင်ဖြင့်ထွန်းညှိခဲ့သည်။ သေချာသည်မှာမိမိစာမျက်နှာ ၃၆ မျက်နှာပါလက်ကမ်းစာစောင်ကိုမည်သူမျှဖတ်။ မရ အိမ်ပြန်လာနေ ၎င်းတွင် ၅၆ ခုထက်မနည်းသောအချက်များပါ ၀ င်သည်။ အိမ်ပြန်လာနေ ဂရိဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောကဗျာ၊ ခေါင်းစဉ်မရှိသောကဗျာနှင့်ထူးဆန်းစွာရေးသားထားသောကဗျာတစ်ပုဒ်ပါရှိသည်။
Anglo-Saxon, Norse နှင့် Celtic ဦး စီးဌာန - ပါမောက္ခရှိမုန် Keynes
ကောလဟာလသတင်းများအရ Simon Keynes သည် Trinity College တွင်ပညာသင်ကြားရုံသာမကထိုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး၎င်းကိုသူအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းယနေ့အထိဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်ပါကသူ၏ထင်ရှားကျော်ကြားသောမိသားစုပင်တွင်သူ၏အဖိုးဖြစ်သူစီးပွားရေးပညာရှင် John Maynard Keynes နှင့်သူ့အဘိုးချားလ်စ်ဒါဝင်တို့ပါဝင်သည်။ ပါမောက္ခ Keynes ၏အဆိုအရ John of Worcester နှင့် Canterbury ၏ Eadmer တို့ကိုဖတ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်ဘဝတစ်ခုရနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သော Bayeux Tapestry ကဲ့သို့ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ သူသည် ASNAC ဌာနတစ်လျှောက်လုံးဟာသဉာဏ်ရှိသူအားလူသိများပြီးချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။ သူသည်နည်းနည်းလေးစိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါဟုပြောခဲ့သည်
ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါမင်းရဲ့ DoS ကဘယ်ရက်သတ္တပတ်ရဲ့နေ့ကိုမေ့သွားတယ်၊ တံတောင်ဆစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှည်လျားတဲ့ဆွေးနွေးခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြေငြာလိုက်တဲ့ရူးသွပ်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူး။